Ihe ndi ahia choro ima banyere ichebe ihe omuma nke uche | Martech Zone
Dika ahia-na oru ndi ozo ndi ozo - dabere na teknụzụ, ichekwa ihe ọgụgụ isi aghọwo ihe kachasị mkpa maka ụlọ ọrụ ndị na-aga nke ọma. Ọ bụ ya mere ndị ahịa ọ bụla ga - eji ghọta ihe ndị bụ isi iwu ọgụgụ isi.
Kedu ihe onwunwe ọgụgụ isi?
Usoro iwu nke America na-enye ụfọdụ ikike na nchebe maka ndị nwe ihe onwunwe. Ikike na nchedo ndị a ọbụna gafere ókèala anyị site na nkwekọrịta azụmahịa. Ihe ọgụgụ isi nwere ike ịbụ ihe ọ bụla sitere na uche nke iwu na-echebe site na ndị ọzọ na-enwetaghị ikike na azụmahịa.
Akụ ọgụgụ isi - gụnyere ihe ndị e mepụtara, ụzọ azụmaahịa, usoro, ihe okike, aha azụmaahịa na akara ngosi - nwere ike so na akụ azụmaahịa gị kacha baa uru. Dịka onye nwe azụmaahịa ị kwesịrị ịghọta na ichebe akụ ọgụgụ isi gị dị oke mkpa dị ka ịchekwa akụ ọ bụla ọzọ na mpempe akwụkwọ gị. Ikwesiri ighota ikike na oru ndi emetutara na ichota ihe omuma gi.
Ejiri Iwu IP chebe ikike ọgụgụ isi gị
E nwere ụdị akụ ọgụgụ isi anọ dị mkpa: patenti, ụghalaahịa, ikike nwebisiinka, na ihe nzuzo nzuzo.
Y’oburu na imeputa teknụzụ nwere ikike, ihe nchebe nke gọọmenti etiti nyere ụlọ ọrụ gị ikike zuru oke ịme, jiri, ree ma ọ bụ ibubata ihe mepụtara ma ọ bụ nchọpụta maka obere oge. Ọ bụrụhaala na teknụzụ gị bụ akwụkwọ ọhụụ, ọ bara uru ma ọ bụghị nke a na - ahụ anya, enwere ike ịnye gị ikike nwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ga - aga n'ihu maka oge nke patent ahụ.
Debanye patent gị nwere ike ịbụ usoro siri ike ma ogologo oge. United States na-arụ ọrụ n'okpuru nke mbụ ịdekọ, ọ bụghị nke mbụ iji mepụta usoro, nke pụtara na onye na-emepụta ihe na ụbọchị ịgba akwụkwọ mbụ ga-enweta ikike na patent. Nke a na - eme oge ịdebanye aha gị dị oke mkpa. Iji chekwaa ụbọchị ịgba akwụkwọ izizi, ọtụtụ azụmaahịa na-ahọrọ ibute faịlụ izizi maka patenti na-enweghị nchekwa. Nke a na-enye ha otu afọ iji mezue ngwa ikikere nke oge a.
Ọ dị mkpa ịmata na patent nke United States Patent na Trademark Office (USPTO) nyere na-emetụta naanị United States. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-asọ mpi na mba ọzọ ma chọọ nchebe patent na mba ndị ọzọ, ị ga-etinyerịrị ebe ọ bụla ịchọrọ nchekwa. Usoro nkwekọrịta nke Patent na-eme ka nke a dị mfe yana usoro iji tinye akwụkwọ ikike patent otu mba n'otu oge n'otu mba 148.
Dị ka onye ọ bụla na-ere ahịa maara, ụghalaahịa bụ ụzọ dị mkpa iji chebe ụdị ụlọ ọrụ. Ụghalaahia na-echebe akara ọ bụla pụrụ iche, dịka akara ma ọ bụ aha akara, nke na-ama ọdịiche dị n'etiti ika gị na ndị ọzọ na ahịa.
Nanị iji ụghalaahia na azụmahịa nwere ike ibute nchedo iwu nkịtị. N'agbanyeghị nke ahụ, ịdebanye aha gị na USPTO ọ bụghị nanị na ị na-achọpụta na ị na-echebe ya kpamkpam, kamakwa ọ na-eme ka usoro ọgwụgwọ dịịrị gị ma ọ bụrụ na mmadụ emebi iwu gị. Ndebanye aha na-enye nnukwu uru maka ụlọ ọrụ, gụnyere ọkwa bara uru maka ọha na eze, ikike nwere ike iji akara ahụ metụtara klaasị nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị edepụtara na ndebanye aha, yana ihe gọọmentị mere maka mmebi iwu ọ bụla.
Ire ahia n’uzo putara ihe bu imeputa oru mbu, ma o bu udi onyogho nke mgbasa ozi, edemede ederede ma obu ihe yiri ka odi mfe dika mgbasa ozi. Typesdị ọrụ a nwere ike ichebe ya site na nwebiisinka. A ikike nwebisiinka bụ ụdị nchedo enyere n'okpuru Federal copyright copyright maka "ọrụ izizi nke onye ode akwụkwọ" nke edobere na mpaghara ụzọ pụtara ìhè. Nke a nwere ike ịgụnye ma ọgụgụ isi ebipụtara ma ebipụtabeghị dị ka uri, akwụkwọ ọgụgụ, ihe nkiri, na abụ, yana akwụkwọ mgbasa ozi, eserese eserese, atụmatụ, sọftụwia kọmputa, yana ụlọ.
Onye ji nwebiisinka nwere ike igbochi ndị ọzọ ire, ịrụ ọrụ, ịhazigharị, ma ọ bụ mepụtaghachi ọrụ na-enweghị ikike-ọbụnadị ụdị ọrụ ndị yiri nke a na-ejikwa otu nzube ahụ. Ọ dị mkpa iburu n'uche, na ikike nwebisiinka na-echekwa ụdị okwu, ọ bụghị eziokwu, echiche, ma ọ bụ usoro ọrụ.
Na mkpokọta, ikike nwebisiinka na-akpakọrịta na-akpaghị aka onye kere ọrụ ọhụụ n'oge emepụtara ya, mana ị nwekwara ike ịhọrọ ịdebanye aha ha na Office nke United States. Ndebanye aha na-enye nnukwu uru, gụnyere ịnwe ndekọ ihu ọha nke nwebisiinka, ụfọdụ nkwenye nke izi ezi, yana ikike iweta ikpe maka ịda iwu na ịnakọta mmebi iwu na ụgwọ onye ọka iwu. Ndebanye aha na kọstọm US na-enyekwa gị ohere igbochi mbubata mbipụta nke ọrụ gị.
Uzo ozo nke ihe omuma nke di nkpa ichebe bu ihe nzuzo ahia nke ulo oru gi. A "Azụmahịa nzuzo" a kọwara dị ka ihe nzuzo, ozi nke na-enye azụmahịa gị uru asọmpi. Nke a nwere ike ịgụnye ihe ọ bụla site na listi ndị ahịa gaa na usoro nrụpụta na usoro maka nchịkọta. Iwu nzuzo na-echekwa ihe nzuzo nke ukwuu, nke a na-ejikarị eme ka Iwu Nzuzo Azụmaahịa. Iwu ahụ na-eleba anya na ozi nzuzo gị bụ ihe nzuzo azụmaahịa mgbe:
Ihe omuma a bu usoro, usoro, ichikota, ihe omume, ngwa oru, uzo, uzo, usoro ma obu ihe ndi ozo echedoro;
Ihe nzuzo ya na-enye ụlọ ọrụ ahụ uru akụ na ụba ma ọ bụ nke bara uru site na amataghị ya ma ọ bụ chọpụta ngwa ngwa; na
Companylọ ọrụ a na-agba mbọ kwesịrị ịchebe nzuzo ya.
A na-echekwa ihe nzuzo azụmaahịa ruo mgbe ebighi ebi ruo mgbe ngosipụta ọhaneze nke ihe nzuzo ahụ pụtara. Companieslọ ọrụ niile ga-ezere ngosipụta na-amaghị ihe. Imejuputa atumatu a na - ekpugheghi nkwuputa (NDA) na ndi oru ya na ndi ozo bu uzo iwu kachasi chebe ahia nzuzo gi. Nkwekọrịta ndị a gosipụtara ikike na ọrụ metụtara ozi nzuzo, ma nye gị ego ọfụma ma ọ bụrụ na ị ghara iji ihe nzuzo ahia gị.
Emebi iwu na-eme mgbe enwetara ihe nzuzo ahia ma ọ bụ site n'ụzọ na-ezighi ezi ma ọ bụ site na mmebi nke obi ike, ma na-eme ihe n'ụlọ ikpe. Ugboro ole ụlọ ọrụ gị jirila NDA mee ihe nwere ike bụrụ ihe ụlọ ikpe na-eji achọpụta iji mara ma ị “gbalịsiri ike iji kpuchido ihe nzuzo,” ya mere, ọ dị mkpa iji hụ na ụlọ ọrụ gị na-eji NDA ndị emebere nke ọma maka nchekwa IP gị. .
Onye ọka iwu IP nwere Ahụmahụ bụ Usoro Mbido mbụ gị
N'ebe asọmpi taa, ọ dị mkpa ka ụlọ ọrụ gị ghọta nke ọma akụnụba ọgụgụ isi ya ma chebe ha nke ọma. Onye ọka iwu nwere ọgụgụ isi nwere ike inyere ụlọ ọrụ gị aka bulie uru asọmpi gị site na atụmatụ nchekwa IP zuru oke.
Onye ọka iwu IP gị bụ usoro izizi gị megide ndị ọzọ na-eji ma ọ bụ iji IP gị eme ihe. Ma ị na onye òtù ọlụlụ na a ruru eru na mpụ ọka iwu, dị ka site na Netwọk Priori, ma ọ bụ were onye ndụmọdụ oge niile n'ụlọ, onye ọka iwu IP ka ejikere onwe ya iji debe IP gị karịa asọmpi o kwesịrị ịbụ.
Tags: nwebisiinkaarịa ọgụgụ isiipiwuiwuụghalaahịa edenyeremkpapriori iwuụghalaahia edenyeretmnzuzo nzuzoedenyere